ZOMA 23 FEBROARY 2017
LOZAM-PIARAKODIA TAO SAMBAVA : Zazavavy Valo taona maty voahitsaky ny fiara tsy mataho-dalana
Matetika aharenesana lozam-piarakodia amoizana ain’olona any amin’ny Distrikan’i Sambava iny, efa ho iray volana mahery izay. 10 octobre 2017
Zazavavy antsoina hoe Elvina maty noraofin’ny fiara tsy mataho-dalana, afakomaly maraina teo tokony tamin’ny 9 ora.
Tao an-tampon-tanànan’i Sambava no nitrangan’ity loza mahatsiravina ity. Araka ny tatitra voaray avy any an-toerana dia nihazakazaka niampita lalana i Elvina, kinanjo nisy fiara 4X4 nirimorimo mafy tampoka. Tsy afaka niala intsony ilay zazavavy ary dia voadonan’io fiara tsy mataho-dalana io. Naratra mafy ity farany, nijanona kosa ilay mpamily ary nanolotra vola 100 000 ariary ny ray aman-dreniny nitondrana azy tany amin’ny hopitaly akaiky indrindra.
Nomeny ihany koa ny laharan’ny finday azo iantsona azy raha toa ka misy ny manahirana. Voalaza fa tao amin’ny toeram-pitsaboana Salfa no nitondrana vonji- maika an’i Elvina. Ora vitsy nahatongavany tao amin’ny hopitaly anefa dia tsy tana ny ain’io zazavavy kely.
Taorian’izany tranga rehetra izany dia noraisiny Polisy ao an-toerana an-tanana ny raharaha. Nantsoin’ireo mpitandro filaminana ilay tompon’ny fiara nahavanon-doza dia tsy nandray antso intsony, araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana. Voalaza fa mpanefoefo ao Sambava ity lehilahy nahavanon-doza ity.
Nahitana zaza sampona toka-maso ILAKA EST- VATOMANDRY (431) 20 février 2018 Nandositra rehefa nosakanan’ny mpitandro filaminana FIARA DUSTER NAMPIAHIAHY (407) 20 février 2018 Olona 7 namoy ny ainy, 8 naratra mafy, trano 3 potika FIANJERANA VATO TENY AMPAMARINANA (384) 19 février 2018 « Ho firenena mandroso indrindra aty Afrika i Madagasikara » ANDRY RAJOELINA (351) 19 février 2018 Ravan’ny polisy ny tambajotrana andian-jiolahy HALATRA MOTO AO TOAMASINA (229) 19 février 2018 Nodimandry ny minisitry ny Filaminana anatiny teo aloha Organès Rakotomihantarizaka FAHAFATESANA TAMPOKA (211) 22 février 2018